नन्दिताको ग्रिन कार्ड र फिल्मको नशा – Mero Film
नन्दिताको ग्रिन कार्ड र फिल्मको नशा
२०७५ असार २५ गते १६:२१
हिरोइन नन्दिता केसी अमेरिकामा कार्यक्रमको लागि जाँदा उतै बसेकी हुन् । नन्दिता मात्र होइन, धेरै कलाकार कार्यक्रमको बाहानामा अमेरिका पुगेर उतै हराएका छन् । सिनेमामा चल्न छाडेपछि भविष्य खोज्दै अमेरिका जाने कलाकारको लर्को लामो छ ।
नेपाली सिनेमामा माग नभएपछि नन्दितालाई पनि अमेरिकाकै बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आयो । उनकी मिल्ने साथी गरिमा पन्त भने यूरोप गएको बेलामा बेल्जियमका हरि थपलियासँग प्रेममा परिन् र पछि बिहे गरेर उतै बसिन् ।
अमेरिका पुगेपनि नन्दितालाई नेपाली सिनेमाको नशाले छोडेको छैन । एकाध बर्ष पो त्यहाँको रमाइलोले रनभुल्ल बनाउँछ । तर, पछि आफ्नो नाम, मिडियाको बखान घटेको देखेपछि मनमा काउकुती लागिहाल्छ नी । यही भएर नन्दिताले अमेरिकामा नै बनेको ‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’मा काम गरेकी छिन् । अमेरिकामा नै बसोबास गर्ने नेपाली कलाकार यो सिनेमामा छन् । बाबु बोगटी पनि अमेरिकामा नै छन् र यो सिनेमाको मुख्य हिरो छन् ।
अब, नेपालबाट अमेरिका पुगेर उतै हराएका कलाकारलाई दर्शकले यो सिनेमा नेपालमा चलेपछि रुचाउलान् त ? यो भने यक्ष प्रश्न हो । तर, यस्तो सिनेमा नै खेल्ने नशा थियो भने घुम्दै फिर्दै अमेरिकाको बाटो किन समात्नु परेको ? नेपालमा बसेर अमेरिकामा फिल्म सुटिङका लागि जानुको मज्जा नै अर्को हुन्थ्यो ।
नन्दितालाई अमेरिकाको ग्रिन कार्डको नशाले पनि छाडेन, सिनेमा खेल्ने नशाले त झन् छाड्दै छाडेन । यसैले त एउटा गीत छ, हरियो डलर, डलरले विगार्यो कलर ।